Warkan wuxuu saameyn ku yeelan karaa bambo malaayiin Faransiis iyo Faransiis ah - TELES RELAY
Warkan wuxuu saameyn ku yeelan karaa bambo malaayiin qof oo Faransiis ah
By bryanekobe On Feb 21, 2021
Christophe Bobiokono: "maya Denis Nkwebo ma qaadan booskeyga" si ...
Raajiyaha 'Domaines du Mfoundi' wuxuu mamnuucayaa Luc Messi Atangana…
sida Trafigura uu uga bartay casharka "Probo Koala" - Young…
Tani waa war saameyn ku yeelan kara bambo malaayiin Faransiis iyo Faransiis ah oo aan fileynin xannibaadyo cusub oo dalka ka socda, oo uu mar kale ku dhawaaqay madaxa gobolka Emmanuel Macron taas oo si wanaagsan u siin karta war dhab ah musiibo waddanka.
Dhawaan ayey noqon doontaa sanad tan iyo markii Faransiisku ku noolaa maalinba maalinta ka dambeysa dhibaatada caafimaad ee coronavirus, tan ugu yarna waxaan dhihi karnaa waa taariikhdan oo ah sannadka 2020, qofna ma filan karin inuu xaaladdu sidaas ahaato masiibo keliya sanad kadib kiisaska ugu horreeya ee COVID19 ee laga helay Faransiiska. Hase yeeshe, waxay umuuqataa in sanad kadib kaliya, dhibaatada caafimaad ay wali sifiican nooga horreyso bilooyin badan oo dheeri ah sida ay sheegeen khabiirada qaar ee aduunka caafimaadka.
Dibadbaxyadii ruxay Algeria ayaa soo noqday
Laakiin haddii dhinaca kale qaar ka mid ah ay u maleynayaan in madaxa gobolka Emmanuel Macron uusan qaadan doonin gobolka waqti dhow si uu u sameeyo ogeysiisyo ku saabsan dhibaatada caafimaad, kuwa kale waxay u maleynayaan in hadda ay tahay oo kaliya maalin uun, sida fariimaha qaar ee aan hayno akhri halkan iyo halkaas, gaar ahaan dhowr warbaahin qaran, waxay u horseedi kartaa aaminaad.
Intii lagu guda jiray maalmihii ugu horreeyay ee fasaxa Aagga A, tani sidoo kale waa jirtay oo dadka Faransiiska qaarkood xitaa waxay u maleeyeen in madaxa dawladdu xitaa go'aan ka gaari doono xadhig saddexaad markii lagu jiro fasaxyada iskuulka Faransiiska. Laakiin waxay umuuqataa in tani ugu dambeyntii aysan aheyn kiiska, sidaa darteed waa inaan awoodnaa inaan helno ogeysiis cusub oo ka imanaya madaxa gobolka maalmaha soo socda, haddii aan rumaysan karno wararka xanta cusub ee aan ka aqrin karno Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron wuxuu la hadlayaa baarlamaanka wuxuuna ku sameeyay hadal naxdin leh coronavirus ...
Waa kanaalada wararka ee BFM TV oo runtii gudbin lahaa macluumaadka oo gebi ahaanba naxdin ku reebay Faransiiska oo awood u yeeshay inay si toos ah u ogaadaan ogeysiiskan. Halka dadka Faransiiska qaar baa wali ku jira fasaxa iskuulka ka maqnaanshaha guriga, waxay noqon kartaa in xariga soo socda uu ku jiro ajandaha.
Waxay ahayd gaar ahaan intii lagu jiray wadahadal fiidiyoow ah oo lala yeeshay qiyaastii shan iyo toban xildhibaan oo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Faransiiska uu go'aansan lahaa tag inta udhaxeysa "sideed ilaa toban maalmood" in talaabo dheeri ah laga qaado. Siduu u tilmaamay golaha, sida uu sheegay madaxa gobolka Emmanuel Macron, waa xilli hore in la gaari karo go'aanno ku saabsan tallaabooyinka xiga ee dhibaatada caafimaad.
Waa waajib na saaran, dadka Faransiiska ah, reer Yurub, inay taageeraan dawladaha madaxbanaan ee codsada. Waxaan ka go'an nahay Saaxil kahortaga kooxaha argagixisada, oo aan la garab taaganahay dadka. Shir-madaxeedka G5 Sahel ee maanta ayaa la qiimeeyay lana qeexay mudnaanta bilaha soo socda
Xaqiiqdii, xilligan, qofna ma awoodo inuu ogaado nooca go'aanka Emmanuel Macron uu awoodi doono inuu ka qaato mowduucan. Qaarkood waxay aamminsan yihiin in wixii ugu xumaa ay weli u imaan doonaan Faransiiska oo la xirayo mustaqbalka, laakiin kuwa kale wax uma arkaan si isku mid ah.
Bandow, xabsi cusub: Emmanuel Macron miyuu ku dhawaaqi doonaa tallaabooyin xaddidan oo xaddidan maalmaha soo socda?
Xiisadan weligeed sidan ugama weyneyn madaxa Faransiiska oo ah kan ugu dhaqsaha badan go'aanno xag-jir ah khuseeya dhibaatada caafimaad ee coronavirus, sida wadamada kale ee Yurub horeyba u sameeyeen.
Iyadoo ay la socdaan hogaamiyaasha G7, ahmiyadaheena 2021 waa cadahay: in la sameeyo wax walba si looga adkaado viruska, loo hubiyo in si cadaalad ah oo hufan loo qaybiyo talaalka, si loo muujiyo midnimo wadamada ugu nugul, si loo soo nooleeyo dhaqaalaheena loona dardar galiyo. kala guur.
Halka qaar ay u maleynayaan in xaaladdu ay kasii darayso oo kasii darayso, qaar kale waxay arkaan rajo badan oo ku jirta taas badalkeedana waxay rabaan inay ka qiyaas qaataan mustaqbal aad u ifaya oo leh qaadista xayiraadaha arki kara iftiinka maalinta sida fududeeynta 18-da maqribnimo khaas ahaan.
Waa inaad gabi ahaanba ka mamnuucdaa cuntooyinkan quraacdaada inay ogaadaan sababaha
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka ugu horreeya: https://www.breakingnews.fr
FERRE GOLA AYAA KA SOO BAXAY AAMUSIILTIISA OO TAAGEERAY FALLY IPUPA, Kani 28 WAA KONGO - Video
FADEEXO !! DJ Arafat Naxashkii Naxashka Kariifiyay .. (Ceebo) - Video
Christophe Bobiokono: "maya Denis Nkwebo booskeyga ma uusan qaban" guddiga ...
Raajiyaha 'Domaines du Mfoundi' wuxuu ka mamnuucayaa Luc Messi Atangana inuu sii wado the
sida Trafigura uu uga bartay casharka "Probo Koala" - Jeune Afrique
Green Congo: Hagayaasha cagaaran ee wadada lagudaray (3/3)